10 -ka Ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan Forbes 2021 | Darajada Forbes
Bogga ugu weyn 10-ka ugu sarreeya Ciyaartoyda ugu mushaarka badan Forbes 2021
FORBES waxay soo saartay liiskeeda ciyaartooyda ugu mushaharka badan adduunka 2021, iyagoo u calaamadinaya kuwa ugu sarreeya ee ka shaqeeya warshadaha isboortiga inay taageereen dakhligooda ka soo baxay abaalmarinta, mushaharka, gunnooyinka, iyo oggolaanshaha 12kii bilood ee la soo dhaafay.
In kasta oo masiibada ku habsatay isboorti iyadoo dhacdooyin badan oo waaweyn la baajiyay ama dib loo dhigay, warbixintu waxay daaha ka qaadaysaa in tobanka cayaaryahan ee ugu mushaharka badan ay guryahooda ka qaateen dakhli dhan $ 1.05 bilyan sanadkii la soo dhaafay, taas oo ah boqolkiiba 28 % .
Sannadkan, dagaalyahanka MMA Conor McGregor ayaa ugu sarreeya liiska 180 milyan oo doollar wadar ahaan dakhliga, isaga oo dhaafay 2 -da halyeey ee kubadda cagta Lionel Messi (#2) iyo Cristiano Ronaldo (#3) kuwaas oo si joogto ah ugu sarreeyay jaantusyada dhowrkii sano ee la soo dhaafay .
Akhri si aad u hesho liistada oo dhammaystiran oo go'aami saamiga ay sameeyaan xiddigaha xiddiguhu.
Conor Anthony McGregor (Irish: Conchúr Antóin Mac Gréagóir; ku dhashay Maalinta Bastille 1988 waa fanaan dagaalyahan Irish ah, feeryahan, iyo ganacsade ah
Laga bilaabo Maajo 17, 2021, isagu waa #5 gudaha darajooyinka fudud ee UFC.
McGregor waxaa laga yaabaa inuu ahaan jiray Cage Warriors featherweight iyo horyaal fudud. Sanadkii 2015, UFC 194, wuxuu kaga adkaaday José Aldo horyaalkii UFC Featherweight Championship isagoo garaacay garaacis 13 ilbiriqsi wareegii koowaad, taas oo ah guushii ugu dhaqsiyaha badnayd taariikhda halganka UFC.
Markii uu ka adkaaday Eddie Alvarez ee UFC Lightweight Championship ee UFC 205, McGregor wuxuu noqday halgamaagii koowaad ee taariikhda UFC si uu ugu qaado koobab laba qaybood oo miisaan leh isku mar.
Ciyaartiisii ​​ugu horreysay ee feerka, waxaa ka adkaaday Floyd Mayweather Jr. Isaga ayaa ah kan ugu muhimsan mushahar-bixinta (PPV) oo soo jiita taariikhda MMA, isaga oo cinwaan uga dhigay shan ka mid ah lixda dhacdooyin ee UFC ee iibka ugu sarreeya.
Akhri Sidoo kale: 15 Khabiir ee Paralegal -ka ugu Mushaarka Badan Adduunka
Cinwaankiisa cinwaankiisu yahay Khabib Nurmagomedov ee UFC 229 wuxuu soo jiitay 2.4 milyan oo iibsi PPV ah, oo ah kan ugu horreeya ee dhacdada MMA.
Ciyaartii uu la yeeshay Mayweather ayaa soo jiidatay 4.3 milyan oo PPV ah oo laga iibsaday Waqooyiga Ameerika, waana ta labaad ee ugu taariikhda badan.
McGregor ayaa loo qiimeeyay sababta oo ah cayaartooyga ugu mushaharka badan adduunka Forbes sannadka 2021, isagoo kasbaday $ 180 milyan. Wuxuu sidoo kale ka dhex muuqday liiska 2018, markii uu galay kaalinta afaraad, iyadoo la sheegay inuu soo galay dakhli dhan $ 99 milyan.
Saamiga dakhliga: US $ 22 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 158 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 180 milyan
Lionel Andrés Messi ayaa sidoo kale loogu yeeraa Leo Messi, (wuxuu dhashay 24 Juun 1987) waa xirfadle kubbadda cagta ah oo reer Argentine ah oo u ciyaaraya weeraryahan isla markaana kabtan u ah kooxda La Liga ee Barcelona iyo sidaas darteed xulka qaranka Argentina.
Inta badan waxaa loo tixgeliyaa sababtoo ah ciyaaryahanka ugu fiican adduunka oo si weyn loogu tixgeliyo mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicneyd abid, Messi wuxuu ku guuleystay rikoor lix Ballon d'Or ah,
rikoor lix kabo dahab ah oo Yurub ah, iyo 2020 waxaa loo magacaabay Kooxda Ballon d'Or Dream.
Wuxuu xirfadiisa ciyaareed oo dhan ku qaatay Barcelona, ​​halkaas oo uu kula guuleystay 34 koob oo rikoor kooxeed ah, oo ay ku jiraan toban horyaal oo La Liga ah, 4 koob oo Copa del Rey ah, iyo XNUMX UEFA Champions League.
Gooldhaliyaha gooldhalinta iyo kubad sameeyaha farshaxanka ah, Messi ayaa heysta rikoorka goolasha badan ee La Liga (474), La Liga iyo xilli ciyaareed Yurub ah (50), seddexleyda ugu badan La Liga (36) iyo sidaas darteed UEFA Champions League (8) . Waxa uu dhaliyay in ka badan 192 gool oo xirfadeed oo waaweyn kooxda iyo dalkaba waxaana uu leeyahay goolashii ugu sarreeyey abid ee ciyaaryahan hal koox u dhaliyo.
Wuxuu ku dhashay kuna barbaaray badhtamaha Argentina, Messi wuxuu u guuray Spain si uu u dilo Barcelona isagoo 13 jir ah, kaasoo uu kulankiisii ​​ugu horreeyey u tartamay isagoo 17 jir ah bishii Oktoobar 2004.
Wuxuu naftiisa u aasaasay inuu yahay xiddig muhiim u ah kooxda saddexda sano ee soo socota, iyo xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee aan kala go 'lahayn ee 2008-09 wuxuu ka caawiyay Barcelona inay gaarto seddexda koob ee ugu horreeya kubbadda cagta Spain; sannadkaas, isagoo 22 jir ah, Messi wuxuu ku guuleystay Ballon d’Orkiisii ​​ugu horreeyay.
Saddex xilli ciyaareed oo guulo leh ayaa xigay, iyadoo Messi uu ku guuleystay afar Ballon d’Or oo xiriir ah, taasoo ka dhigtay inuu noqdo ciyaaryahanka koowaad ee ku guuleystay abaalmarinta afar laab iyo intii isku xigta.
Intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii 2011-12, wuxuu dhigay rikoorkii La Liga iyo Yurub ee goolal badan oo la dhaliyey hal xilli ciyaareed, halka uu iska dhigay inuu yahay gooldhaliyaha ugu sarreeya abid ee Barcelona.
Labadii xilli ciyaareed ee xigay, Messi ayaa kaalinta labaad ka galay abaalmarinta Ballon d’Or isagoo ka dambeeya Cristiano Ronaldo (oo loo arko inuu yahay shaqsi la tartamaya), ka hor inta uusan dib u helin qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa intii lagu jiray ololihii 2014–15, isagoo noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya abid La Liga wuxuuna ku hogaamiyay Barcelona. Saddexleeydii labaad oo taariikhi ah, ka dib markii la siiyay abaalmarinta Ballon d'Or shanaad ee 2015.
Messi ayaa la wareegay kabtannimada Barcelona sannadka 2018, sannadka 2019 -na wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or -ka lixaad. Xiddiga reer Argentine, Messi waa gooldhaliyaha ugu sarreeya dalkiisa.
Heerka dhalinyarada, wuxuu ku guuleystay 2005 FIFA World Youth Championship, isagoo ku dhammeeyay tartanka labada kubbadda dahabka iyo Kabaha Dahabka ah, iyo koob Olombikada ah oo ku yaal Ciyaarihii Xagaaga ee 2008.
Ciyaaryahannadiisa oo ah kuwa wax dhiciya, lug-bidix-lugaha ayaa isbar-bar dhig ku sameeyay ninka ay isku waddanka yihiin ee Diego Maradona, kaasoo ku tilmaamay Messi inuu yahay beddelkiisa.
Ka dib markii uu kulankiisii ​​ugu horreeyay saftay bishii Ogosto 2005, Messi wuxuu noqday kii ugu yaraa ee reer Argentina ee ciyaara oo gool dhaliya intii lagu jiray Koobkii Adduunka ee FIFA intii lagu jiray daabacaadii 2006 wuxuuna gaaray meeshii ugu dambeysay Copa América 2007, halkaas oo loogu magacaabay ciyaaryahanka da 'yar ee tartanka.
Isagoo ahaa kabtanka xulka laga soo bilaabo bishii Ogosto 2011, wuxuu Argentina ku hogaamiyay 3 final oo xiriir ah: Koobkii Adduunka ee 2014, inuu ku guuleystay Kubadda Dahabka, sidaas darteedna Copa América 2015 iyo 2016.
Ka dib markii uu ku dhawaaqay hawlgabkiisii ​​caalamiga ahaa ee 2016, wuxuu ka noqday go'aankiisii ​​wuxuuna dalkiisa u horseeday u soo bixitaanka Koobka Adduunka ee FIFA 2018, iyo inuu ku dhammaysto 2019 Copa América.
Isla sannadkaas wuxuu sidoo kale ka caawiyay kooxda inay qabsadaan 2019 Superclásico de las Américas iyo Brazil ka dib markii uu dhaliyay goolka guusha.
Mid ka mid ah ciyaartooyda ugu caansan dunida oo dhan, Messi waxaa kafaala qaaday shirkadda dharka isboortiga ee Adidas tan iyo 2006 wuxuuna isu taagay inuu yahay hogaamiyaha ugu sarreeya sumcadda.
si waafaqsan France Football, wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu mushaarka badan adduunka shan sano lixdii sano ee u dhexeysay 2009 iyo 2014 waxaana Forbes ku qiimeeyay cayaaryahanka ugu mushaarka badan adduunka 2019.
Messi wuxuu ka mid ahaa 100 -ka qof ee ugu saamaynta badan adduunka 2011 iyo 2012.
Bishii Febraayo 2020, waxaa la guddoonsiiyay Abaalmarinta Ciyaaryahanka Sanadka ee Laureus, isagoo sidaas ku noqday ciyaartoygii kubbadda cagta iyo sidoo kale cayaaryahankii isboortiga aasaasiga ahaa ee ku guuleystay abaalmarinta.
Dabayaaqadii sannadkaas, Messi wuxuu noqday ciyaartoygii labaad ee kubbadda cagta (iyo ciyaartooygii labaad ee isboortiga) ee dhaafa $ 1 bilyan oo dakhli xirfadeed ah.
Ciyaaraha: Kubadda Cagta
Saamiga dakhliga: US $ 97 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 33 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 130 milyan
Akhri Sidoo kale: Wakiilada iibka ee ugu lacagta badan | 10ka Shaqadood ee Ugu Sareeya ee Iibka Si Fiican u Bixi doona 2021
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH (wuxuu dhashay 5 -tii Febraayo 1985) waxaa laga yaabaa inuu yahay cayaaryahan kubbadda cagta Portugal u ciyaara oo horusocod u ah kooxda Serie A ee Juventus isla markaana kabtan u ah xulka qaranka Portugal.
Inta badan waxaa loo arkaa ciyaaryahanka ugu fudud adduunka oo dhan waxaana loo arkaa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicneyd abid, Ronaldo wuxuu ku guuleystay shan abaalmarinood oo Ballon d’Or ah iyo 4 Kabaha Dahabka ah ee Yurub, oo labaduba diiwaan u ah ciyaaryahan EU ah.
Wuxuu ku guuleystay 32 koob oo waa weyn xirfadiisa, oo ay ku jiraan todobo horyaal, shan UEFA Champions League, hal UEFA European Championship, iyo hal horyaal UEFA Nations League.
Ronaldo ayaa heysta rikoorka goolasha ugu sarreeya (134) iyo caawinta (42) taariikhda UEFA Champions League.
Waa mid ka mid ah ciyaartoydii yaraa ee la duubay ee lahaan jiray 1,100 kulan xirfadeed oo dib -u -habeyn ah wuxuuna dhaliyay in ka badan 770 goolal xirfadeed oo rasmi ah kooxda iyo dalka.
Sidoo kale waa ninka labaad ee gaara 100 gool oo caalami ah sidaas darteedna waa kii ugu horreeyay ee Yurub ah oo garta
Saamiga dakhliga: US $ 70 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 50 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 120 milyan
Ciyaaraha: Kubadda Cagta (NFL)
Saamiga dakhliga: US $ 97.5 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 10 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 107.5 milyan
Ciyaaraha: Kubadda Kolayga
Saamiga dakhliga: US $ 31.5 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 65 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 96.5 milyan
Saamiga dakhliga: US $ 76 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 19 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 95 milyan
Saamiga dakhliga: US $ 30,000 (garoonka dhexdiisa); $ 90 milyan oo doollar (bannaanka ka baxsan)
Wadarta: US $ 90 milyan
Akhri Sidoo kale: Waa kuma Ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NFL? | Tobanka ciyaartoy ee ugu sarreeya NFL adduunka
Ciyaaraha: Qaacidada 1
Saamiga dakhliga: US $ 70 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 12 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 82 milyan
Saamiga dakhliga: US $ 45 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 31 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 76 milyan
Saamiga dakhliga: US $ 31 milyan (garoonka dhexdiisa); US $ 44 milyan (garoonka ka baxsan)
Wadarta: US $ 75 milyan
Wakiilada iibka ee ugu lacagta badan | 10ka Shaqadood ee Ugu Sareeya ee Iibka Si Fiican u Bixi doona 2021
Waa kuma Ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NFL? | Tobanka ciyaartoy ee ugu sarreeya NFL adduunka